Isikhangiso: kuyini, incazelo kanye nezibonelo mayelana nalesi simo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ku-meteorology kubalulekile ukutadisha izinguquko zomzimba ezenzeka emkhathini ngesikhathi sangempela ukubikezela okuzokwenzeka. Umkhathi yindawo lapho ukunyakaza okukhulu kwenzeka kalula kakhulu. Ngale ndlela, ukushintshaniswa kokushisa ngokunyakaza okuqondile nokuqondile kuvunyelwe. Ukuthuthwa okuvundlile kokushisa kwezinye izinto ezibonakalayo ngumoya kubizwa ngokuthi yi-advection. Isikhangiso umgomo wale ndatshana.
Sizohlaziya ukubaluleka kokwazi ukukhangiswa okukhona emkhathini ukuze sazi isimo sezulu nokuguquka kwesimo sezulu. Ngabe ufuna ukufunda kabanzi ngayo? Kumele uqhubeke ufunde 🙂
1 Yini advection
2 Izici zokukhangisa
3 Izimbangela zokwehliswa
4 Ukuphola kwe-Adiabatic
5 Shintsha ekushiseni ngenxa ye-advection
Ku-meteorology kuvame kakhulu ukusebenzisa igama elithi convection ukukhetha ukunyakaza okuqondile. Inani lejubane lalezinhlangano alidluli ngokujwayelekile ukunyakaza okuvundlile kwekhulu. Ngakho-ke, kungabonakala ukuthi amafu asathuthuka amile ahamba kancane futhi ayakwazi ukuthatha usuku lonke.
Ukuhamba okuvundlile kwenqwaba yomoya kwenzeka ngezinga elikhulu emhlabeni wonke. Yiyo ehambisa amandla okushisa isuka ezifundeni ezishisayo iye ezindaweni ezibandayo. Bayakwazi ukudlulisa amandla kusuka kolunye uhlangothi lomhlaba baye kolunye, behamba izinkulungwane zamakhilomitha kude. Yile ndlela yokuhamba evundlile eyi-advection futhi ebaluleke kakhulu futhi ephikelelayo kunemisinga yomoya emile.
Ku-meteorology kanye ne-oceanography yangempela, ukukhonjiswa kuvame ukubhekiswa kukho ukuthuthwa kwempahla ethile yomkhathi noma yolwandle, njengokushisa, umswakama noma usawoti. Ukuvezwa kwesimo sezulu noma kwe-oceanographic kulandela ukuvela kwe-isobaric ngakho-ke ikakhulu kuvundle. Kufana nokuthuthwa kwempahla esemkhathini ngumoya.
Ukuze siqonde kangcono lo mqondo, sizonikeza izibonelo ezithile zokukhangisa okufudumele nokubandayo. Ukufudumala okufudumele yilokho ukushisa okuqhutshwa umoya kuya kwenye indawo. Ngokuphambene nalokho, ukukhishwa okubandayo ukuthuthwa kwamakhaza kuya kwezinye izindawo. Kodwa-ke, zombili zingukuthuthwa kwamandla ngoba, yize umoya usezingeni lokushisa eliphansi, usenamandla.
Ekubikezelweni kwesimo sezulu, igama le-advection libhekisa ekuthuthweni kobukhulu obunikezwe yingxenye evundlile yomoya. Uma sine-advection ebandayo, ijwayele ukuya ezindaweni ezifudumele. Uma kukhona ukuhlangana okufudumele, kwenzeka ngaphezu kwenhlabathi ebandayo nezilwandle nokupholisa kwenzeka kusuka ngezansi.
Kunezinhlobo eziningi zokuncipha komhwamuko wamanzi. Eyokuqala ngemisebe kanti eyesibili nge-advection. Umhwamuko wamanzi ungabuye ujijiswe ngokuxuba uquqaba lomoya nokupholisa ngokwandiswa kwe-adiabatic. Lesi sakamuva siyimbangela yokwakheka okukhulu kwamafu.
Ekupholiseni kwe-advection, umoya oshisayo futhi onomswakama uhanjiswa ngokuvundlile, unezele ngaphezulu kwendawo ebandayo noma inqwaba yomoya.. Ngenxa yokuxhumana phakathi kwenhlama efudumele nebandayo, izinga lokushisa lomoya wenhlama efudumele lehla ukufana nalena ebandayo. Ngale ndlela ubuwula buqala ukwakheka, inqobo nje uma ukwehla kwamazinga okushisa emfudumalo kufinyelela endaweni yamazolo bese kugcwala ngamanzi.
Ukupholisa imisebe kwenzeka lapho umhlaba ushiswa yilanga. Isendlalelo esiseduze phezulu siqala ukushisa ngenxa yalokho. Ngalesi sizathu, amagwebu omoya ashisayo akha futhi, ngenxa yobuningi bawo obuphansi, ivame ukukhuphuka ize ihlangane nezendlalelo eziphakeme kakhulu nezibandayo. Lapho zifika ezingqimbeni eziphakeme, izinga lokushisa liqala ukwehla bese zigcwala, zigcwaliswe futhi zakhe ifu.
Kungenxa yokwehluka kwamazinga okushisa ngenxa yokwehla kwengcindezi yasemkhathini lapho umuntu enyukela phezulu. Imisinga eminingi emile ingakuguqula lokhu kupholisa, okwaziwa nangokuthi i-gradient ezishisayo yemvelo.
Lapho umoya uvuka, umfutho womoya uyancipha. Ngalesi sizathu, ukunyakaza nokushayisana kwama-molecule nakho kuyehla, ngaleyondlela kupholisa umoya. Njengenjwayelo, imvamisa yehla cishe ngama-degree ama-6,5 ngekhilomitha ngalinye lokuphakama.
Uma umoya womile, ukwehla kwezinga lokushisa kuphakeme kakhulu (cishe amadigri ayi-10 ngekhilomitha ngalinye ukuphakama). Ngokuphambene nalokho, uma umoya ugcwele, ukwehla kwawo kuzoba njalo ama-degree ama-5 kuphela ngekhilomitha.
Amafu akhiwe ngesethi yezinhlayiya zamanzi ezincane kakhulu futhi ezinhle, iqhwa noma inhlanganisela yakho kokubili. Zakhiwa ngokujiya komphunga wamanzi emkhathini. Lokhu kubangela ukuba i-advection ihambise amakhaza asuke emafwini ayise kuwo wonke umkhathi futhi asabalale.
Shintsha ekushiseni ngenxa ye-advection
Ukudalulwa kunamayunithi wezinga lokushisa ahlukaniswe amayunithi wesikhathi. Kukhombisa ukwehluka okushisayo iphuzu elikutholayo ngenxa yokufika komoya ophethe umoya emazingeni okushisa ahlukene.
Uma, ngokwesibonelo, lapho silinganisela khona umoya ufika uvela endaweni ebandayo, singahlangabezana nokupholisa futhi ukuvezwa kwamazinga okushisa kungaba yinombolo engemihle ezositshela kahle ukuthi mangaki ama-degree ngeyunithi yesikhathi lapho izinga lokushisa lehla khona.
Ukupholisa umoya kungenzeka ngezizathu ezahlukahlukene:
Ngenxa yokufudumala kobuso bomhlaba I-convection yamahhala ikhiqizwa yimisebe yelanga.
Ngomlando womhlaba, Ngenxa yokwenyuka kwezendlalelo zomoya ukuwela intaba, ukuhlangana okuphoqelekile kuyenzeka.
Umoya uphoqeleke ukuba uvuke endaweni ezishisayo nokubandayo, kukhiqiza ukunyakaza okuvundlile kwesisindo somoya obandayo, kukhiqizwa ukunyakaza okuvundlile emoyeni ofudumele ukukhuphuka.
Njengoba ukwazi ukubona, i-advection yinto ebaluleke kakhulu okufanele uyicabangele nge-meteorology. Kuyisimo esihle impela uma kukhulunywa ngokubikezela kwesimo sezulu nokwazi amandla okuqina nokuzinza komkhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isikhangiso